Soo dejisan PicPick 5.0.7 Standard iyo Portable – Vessoft
WindowsSawireynta iyo qaabeyntaScreenshotsPicPick
Bogga rasmiga ah: PicPick
PicPick – waa software si loo sameeyo sawirada siyaabo kala duwan. Software wuxuu ka dhigayaa shaashadaha shaashadda oo dhan, daaqada firfircoon ama waxyaabaha ay ka midka yihiin, daaqada leh wareega iyo sidoo kale xulashada, goobaha go’an ama shaandhada ee shaashadda. PicPick waxa ku jira tifaftiraha sawirada dhismaha oo leh dhammaan hawlaha lagama maarmaanka u ah inuu wax ka beddelo oo ku daro saamaynta muuqaalka ee shaashadda. Software wuxuu leeyahay qalab dheeraad ah si loo cayimo midabka pixel sida hoosta cursorka, cabbiraa cabbirka shayga, kordhiyo meel kasta oo ka mid ah shaashadda, xulo hal qalin leh qalin ka hor inta aan la qaban, iwm Sidoo kale PicPick kuu ogolaanaya inaad u habeysid shaashadda screen goobaha, tayada iyo noocyada faylasha si ay u badbaadiyaan by default iyo dhigay hotkeys.
Siyaabo kala duwan oo lagu samayn karo sawirrada
Goobaha barnaamijka horumarsan
Taageero dhowr ah oo kormeerayaal ah
Soo dejisan PicPick
Faallo ku saabsan PicPick
PicPick Xirfadaha la xiriira